Yiya eVenezuela ukuya eColombia - I-odyssey yam - i-Geofumadas
Yiya eVenezuela ukuya eColombia -I-odyssey yam
NgoDisemba, 2018 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Ngaba uye wabuya uziva umzimba ngaphandle komphefumlo? Ndiliva kungekudala. Umzimba uba yinto engenayo into yokuba uvakalelwa kukuba iphila ngenxa yokuba iphefumula. Ndiyazi ukuba kufuneka kube nzima ukuqonda, kwaye nangakumbi nangaphambi kokuba ndide ndiqhayise njengomntu ontle, uzele uxolo lwamoya nokomoya. Kodwa xa zonke ezo mpawu ziphela, uqala ukuvakalelwa ngathi akukho nto ikhathaza okanye uyayikhathalela.
Ngaphandle kwimiba yembono, yezopolitiko okanye yeemeko, nje ukuphendula isicelo sikaGolgi, ndibala oku. Wonke umntu unako ukutolika oko amajelo athetha kuye, ngakumbi kwizinga lamazwe ngamazwe. Apha, andinakukushiya njengoko kwakungenxa yam odyssey ukusuka eVenezuela eColombia.
Njengoko kwakuyinto yonke kum Venezuela, ngaphambi kokuba le nkathazo.
Uxolo lwalo lwaluphelile xa zonke izinto zaqala ukutshintsha eVenezuela, nangona andinakukwazi ukugqiba xa kuqubuke, ngoku kungena kweengxaki engazange ndicinga ukuba ziya kwenzeka. Andiyazi ukuba kwakuguquke engqondweni yam njenge-epiphany, isigqibo sokushiya ilizwe lam kunye nosapho lwam; yintoni, de kube ilanga lwanamhlanje, liye lona lukhuni kunene ndihleli kuyo.
Ndiza kukuxelela ukuba lwalunjani uhambo lwam ukushiya iVenezuela, kodwa kuqala, ndiza kuqala ngokuchaza indlela endandihlala ngayo kwilizwe lam. Kwakufana neliphi ilizwe eliqhelekileyo; Ungaziva ukhululekile ukwenza nantoni na, ufumane isonka sakho esisebenza nzima, uphile umhlaba wakho kunye nezikhala zakho. Ndakhulela kwisiseko sobunye bosapho oluhlangeneyo, apho nabahlobo bakho bangabantakwenu kwaye uyaqonda ukuba ubuhlobo buba ziintsapho zegazi.
Ugogo wam nguye owayewisele umthetho, wayeyiyo intsika yentsapho, kuba sonke siba ngamadoda athile, njengoko bethetha ehlabathini lam echaos pa 'lante. Amantombazana amane am umthombo wam, kwaye nabazalwana bam -abazalwana abangaphezu koonyana babo-uye kunye nomama, isizathu sam sokuphila. Ndivuke ndinombulelo mihla le yokuba ndikunye nosapho. Isigqibo sokuhamba, safika engqondweni yam, kungekuphela ngenxa yesidingo senkqubela phambili, kodwa nakwikamva lonyana wam. EVenezuela, nangona umqolo wam ubunebhongo yonke imihla kwaye ndenza izinto eziliwaka ukuze ndibengcono, yonke into yayimbi kakhulu kunangaphambili, ndaziva ngathi ndikukhuphiswano lweSurvivor, apho bekuphela kwabaphilayo, umxhaphazi kunye ne-shamwariquero.
Isigqibo sokushiya iVenezuela
Ndandiqonda izibetho zokuba eVenezuela, amathuba awekho, kwaneyona nto isisiseko ineziphene: ukungabikho kwenkonzo yombane, ukusela amanzi, ukuthutha kunye nokutya. Ingxaki ifike ekulahlekelweni kweenqobo ezisemgangathweni ebantwini, ungabona abantu abahlala bodwa becinga ngendlela yokwenzakalisa abanye. Ngamanye amaxesha, bendihlala phantsi ndicinge ukuba yonke into eyenzekileyo ibangelwa kukuba nguThixo osilahlile.
Ndineenyanga ezithile ndicwangcisa uhambo entlokweni yam, kancinci kancinci ndakwazi ukuphakamisa iidola ze-200. Akukho mntu waziyo, okanye babelindelwe ukuba babanike loo nto. Kwiintsuku ezimbini phambi kokuba ndihambe, ndafowunela umama ndamxelela ukuba ndiza kuya ePeru kunye neepasile (abahlobo), kwaye ndiza kuba kwisiphelo sendlela yokuthenga itikiti lebhasi elaliza kufika kwindawo yam yokuqala, eColombia.
Apha lo mthetho wokuhlukunyezwa uqale, apho baninzi bayokwazi, akukho nto isebenza njengakwamanye amazwe, akunakwenzeka ukuthenga itikiti okanye itikiti lokuhamba ngalo naliphi na ixesha olifunayo. Ndichithe iintsuku ezimbini ndilala esitishini, ndilinde enye yeebhasi, kuba izithuthi zazinemoto ezimbini kuphela ngenxa yokunqongophala kweendawo zokuphumla. Abanini bomgca badlulise uluhlu kuluhlu ngalunye lweyure ze-4 ukuze abantu bakhusele isikhundla, ngenqaku labo:
"Lowo ongekho apha xa edlula uluhlu, ulahlekelwa esihlalweni sakhe"
Kwakumangalisa ukuba kuselwandle lwabantu abaya kuhamba ngendlela efanayo nam, amadoda, amabhinqa kunye nabantwana kweso sigqeba; endikumele ndiyiqakatheke, bekuyibuhlungu, kwandiva kakubi kwaye eso sihlwele sabantu senza uzive u-claustrophobic.
Ndalinda iintsuku ezimbini apho, ndenza umgca wam ukukwazi ukuthenga ithikithi. Andizange ndiqalise kwaye loo ntliziyo yokungaqinisekiyo eyasisondeza ingxaki yam yafuna ukuyeka, kodwa andizange ndiyike. Kwakunceda ukuba ndibe nabahlobo abasondelene nam kwaye sonke saxhasana ukuze senze ngcono. phakathi kwamahlaya kunye neefowuni kwiintsapho zam. Kwaye kwafika ixesha lokugqibela ebhodini ukuya eSan Cristóbal - I-Táchira State. Ixabiso letikiti laliyiyo 1.000.000 yeBolívares Fuertes, phantse i-70% yomvuzo omncinci ngelo xesha.
Bachitha iiyure ehleli phezu ebhasini, iindaba ezimnandi zezokuba wifi ubuncinane kwafuneka ukudibanisa, wakhangela ngathi kumacandelo ambalwa alcabalas National Guard, yaye umqhubi ayeke elifutshane kakhulu, apho wamnika imali ukuze uqhubeke. Xa ndifikile eSan Cristóbal, sele sele i-8 ekuseni, kwafuneka ndifumane enye izothutho ukuya eCúcuta. Silindile kwaye silinde, kwakungekho nto yokuhamba, sabona abantu behamba nezikhephe, nangona kunjalo, asizange sithathe namathuba kwaye sigqibo sokuhlala apho. Ukulinda kuthatha iintsuku ezimbini, bonke belele ebaleni, size sithathe iteksi ebelwanayo, nganye ihlawulwe i-100.000 Bolívares Fuertes.
Siqale 8 kusasa kweli candelo ukuze Cucuta yaba yeyona iyingozi, wokugqibela National Guard kwafuneka ukuba aye nge 3 alcabalas a CICPC, omnye we Bolivarian National Police. Kwi-alcabala nganye, basisitshengisa ngathi besingabakhohlisi; bekhangela oko bangayithatha, ndinezinto ezimbalwa kuphela, akukho nto yokuxabisa kunye ne-200 $; ukuba ndihlala kwindawo engenafikelelekiyo
Xa ufika, kwakuyi-10 ekuseni, kwaye ubona abantu bebiza ngokuba ngabacebisi. Ezi -kuthethwa- ihambele inkqubo yokutshintshwa kwenkqubo yokutshintshela phakathi kwe-30 kunye ne-50 $, kodwa andizange ndithobele ingqalelo nayiphi na, siyeka kwibhuloho ukwenza umgca kwaye ekugqibeleni sifake iCúcuta. Kwaye kwada kwasemini ngomhla we-9 wobusuku esasikwazi ukuwusayina ipasipoti yokuphuma.
Saxelelwa ukuba kutywinwe i ongenelelo yokundwendwela Colombia kwafuneka ukuba isicatshulwa Indawo elandelayo, njengoko kwaba ubusuku 9, kwakukho neelokhari evulekileyo ukuthenga itikiti ukuya kwindawo yam olandelayo. Abantu babememeza.
baya kuvala umda, abo bangenayo ithikithi kufuneka bahlale apha, abayi kukwazi ukuya kwindawo elandelayo yokulawula.
Le meko yaba yinkxalabo kwaye yathinteka, sabona abantu besoyika becula izikhundla ezingaqhelekanga, baza bathi:
Bamele bathathe isigqibo ngokukhawuleza ukuba benzani, emva kwe10 yobusuku iipilerrila ezipilisi zidlula imali zicela imali kwaye zithatha yonke into kuwo wonke umntu.
Ngokungummangaliso, ithemba lam, bengazi ukuba benze ntoni, umcebisi okwacaca ukuba umhlobo apho wayehlala e Caracas, wandibamba kunye nabahlobo bam kwiofisi umnini omnye imigca ebhasini, siye kwathengiswa sicatshulwa ngalinye wabonakala kwi $ 105 kwaye basisombulula indawo yokulala, de kube ngumhla olandelayo.
Ngobo busuku andikwazanga kuzola, ndicinga amaxesha ndichithe yonke loo mihla waba nam kwimo kodityaniso luvo, kuza kusasa, siye wenza umsila bazigcine ongenelelo passport Colombia, yaye ekugqibeleni nako ukungena.
Akuyena wonke umntu onomdla wokudlula, njengam. Abo bacinga ukufuduka kufuneka bathathe iilumkiso; Olu hambo lufutshane, kodwa akulula ukuhamba nayo nayiphi na imeko edibene nayo kwaye ndabona. Kukho izinto endikhethayo nje ukulibala.
Ngolunye athi intle yelizwe labo, ngenxa yokuba izwe wamthabatha ngaphakathi lonke uthando ilizwe apho azalwe, ngenxa iflegi leyo ekwenza isijwili xa uyibona phezu ihempe umntu ecela ukuba eziinkozo kwikona ye Bogota.
Le ngxaki inzima, ngenxa yokufuna ukuba sisondele kwintsapho yakho. Ndandisoloko ndithemba, kwimiba engxaki; kwaye nangona ndinokholo, konke oku kuthatha ithemba kwixesha elifutshane. Into ephela engaphelelwa yintando yentsapho. Okwangoku, ndifuna nje unyana wam ukuba abe nekamva elingcono.
Post edlulileyo«Edlulileyo Amava okufunda nokufundisa i-BIM kwimiqathango eqhelekileyo kwiCAD
Post Next Ukwenyuka okanye ukunganyani? Yintoni engcono ukubonisa iphrojekthi? Okulandelayo "